« Aoka izay ny havoretran’ireo mpivarotra », hoy i Maminiaina - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Nirodana ny Zaimaika ! “Volana vitsivitsy izay no nirodana i Zaimaika, izay toeram-pisakafoanana mana-tantara eto Antananarivo. Nataon’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra fanamby ny fanamboarana izany. Ankehitriny, mandroso ny asa ary efa mamaramparana azy isika” hoy ny Ben’ny tanàna Andriantsitohaina ny volana jolay 2020 teo amin'ny kaonty Facebook'-ny. Efa tamin’izany no nilaza ny ben’ny tanàna fa “homena fiofanana sy fanentanana manokana ireo mpivarotra mikasika ny « Code Municipal d’Hygiène », ho fanajana ireo fitsipika sy fepetra amin’ny fahadiovana. Ny tanjona dia mba ho toerana madio lalandava sy hahasarika antsika rehetra i Zaimaika”.
Fahadiovana ! Io no teny miverim-berina mandritra ny angom-baovao notanterahina teny an-toerana. Mifandray amin’ny hafatra efa nampitain’ny ben’ny tanana ny volana jolay 2020 izany. “Izaho dia mpivarotra ato amin’ny Zaimaika, tompon-tsena ato. Manantena fa hiova famindra amin’izay ireo namanay. Nampiaiky volana amin-tany ny loto, ny havoretrana, ny voalavo, ny lalitra, ny fofon’ilay WC public teo talohan’ny fanamboarana azy kanefa toeram-pisakafoana” hoy i Maminiaina Urbain. Samy mitaky io fahadiovana io avokoa ny ankamaroan’ny mpanara-baovao anaty tambazotran-tserasera, raha vao navoaka facebook ny endrika vaovaon’ny Zaimaika, tamin’ny herinandro. Voalazan’ireo mpiandraikitra, tahaka ny Delege fa tsy andeferana intsony ireo mpivarotra tsy mitandro ny fahadiovana. “Hetahetanay araka io lokon’ny Zaimaika io mba hadio tahaka ny avenue sy ny Lapan’ny Tanana”, hoy i Serge Landry, isan’ny tompon’ny tsena ao amin’ny Zaimaika. Nambaran’ireo solontenan’ny mpanamboatra tsena fa fa efa tsy ao ambany intsony ny WC public.
Maro amin’ireo mpivarotra ihany koa no maniry ny fikojakojana ny foto-drafitrasa sy ny fanadiovana ho ankinina amin’ny tsy miankina. “Tolo-kevitra avy aminay ny hanohizan’ny kaominina ny fitantanana ny trano amin’ny tsy miankina, araka ny fifanarahan’izy ireo tamin’ny fanorenana izao foto-drafitrasa mamiratra izao. Torak’izany koa ny fiambenana. Tsy vitsy ireo fitaovana very teo aloha kanefa mandoa ny karaman’ny mpiambina ny mpivarotra.” Hoy i Louis Jese Marius, anisan’ireo tompon’ny Tsena Zaimaika.
Tsy fandriam-pahalemana ! Mampitaraina ireo mponina eny amin’ny manodidina ny tsy fandriam-pahalemana, indindra amin’ny alina ka tsy vitsy ireo velom-paniriana ny hisian’ny jiro manazava amin’ireo lalana manodidina. Anisan’ny tsangam-bato nilokalokan’ny Ben’ny tanàna ankehitriny tamin’ny fampielezan-kevitra ny famitana ity tsenan-tsakafo ity. Voalazan’ny mpivarotra iray fa : “efa in’efatra niova ny mpanamboatra azy vao vita ny Zaimaika”, hoy i Hanitriniaina Rahajanirina. Marihina fa mihoatra ny taonjato iray ity tsena ity. Ny taona 1918 no nananganana ity Zaimaika ity.